မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်ရံပုံငွေ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်အနေဖြင့် တချို့အလှူရှင်များ၏ အလှူငွေများနှင့်ယခင် (၂၀၀၆ မှ ၂၀၀၉ မတ်လ) အထိ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၉ မတ်လက စပြီး.. ၂၀၁၁ မတ်လ အထိ ကြီးကြပ်ရေးမှူး မတူးတူး တစ်ယောက်တည်းကဘဲ ဖိုရမ်အဘက်ဘက်မှရပ်တည်နိုင်အောင် လှူဒါန်းထောက်ပံ့ ခဲ့တာ.. မြန်မာမိသားစုဝင်များ အသိပင် ဖြစ်ပါတယ်.။
ကျွန်တော်တို့ဖိုရမ်ဟာ အွန်လိုင်းမှာ (၄)နှစ်ကျော် (၅) နှစ်နီးပါး ရပ်တည်လည်ပတ်နေပါတယ်..။
ယခုမြန်မာမိသားစုဖိုရမ်သည် Virtual Private Server ဖြစ်သော VPS ဆာဗာ ( www.knownhost.com) သို့ ပြောင်းရွှေ့မှုပြီးစီးပြီး တလ လျှင် ဒေါ်လာ (၇၀) ခန့် ကုန်ကျပြီး တနှစ်လျှင် ဒေါ်လာ (၈၄၀) ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကုန်ကျမှုများအတွက် အသင်းဝင်များထံ ရံပုံငွေကို သီးသန့်ကောက်ယူတည်ထောင်ပြီး.. ဖိုရမ် ရေရှည်ရပ်တည်မှု အတွက် ငွေကြေးကိစ္စ မပူရလေအောင် ဆောင်ရွက်ချင်သည့် အတွက် အသင်းဝင်များ ထံ ရံပုံငွေထည့်ဝင်နိုင်ကြောင်း အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်.။
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် ရေရှည်အတွက်. အသင်းဝင်များ အပေါ်များစွာမူတည်နေပါတယ်။
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် ရံပုံငွေအတွက် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များထံ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းမှု ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်.။
၀၁ - ၅၄၉၀၈၈ ကို နံနက် ၉ ကနေ ၁၁ နာရီ
ည ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီတွင်း
Account Name: Ma Aye Thu Aung
Account No: 0041210133421
(LanMaDaw Branch; KBZ) လမ်းမတော်၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်။
119 - 79010 - 7
PayPal Account - supermoderator.myanmarfamily@gmail.com
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်အသင်းဝင်များအနေဖြင့်.. ပီအမ်ဖြင့် ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်.။
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် ရံပုံငွေသည်. မြန်မာငွေ 915000 ( ကိုးသိန်းတစ်သောင်း ငါးထောင်ကျပ်) ဘဏ်ထဲတွင်အပ်နှံထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း အသင်းဝင်များ သိရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ (http://www.myanmarfamily.org/forum/s...46&postcount=1)
ငွေ ဒေါ်လာ (၅၀၀) အတွက်မူ စာရင်းရှင်းတမ်းကိုမူ မတူးတူးမှ ဤလင့် တွင် ရံပုံငွေရှင်းတမ်း တင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် အသင်းဝင်များအနေဖြင့်. တခြားမြို့များ၊နှင့် တခြား နိုင်ငံတို့ မှ တာဝန်ယူပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးချင်သူများ ရှိရင် ဖြင့် ပီအမ်ပို့ပေးပါ..။ ကျွန်တော်တို့ ကြေငြာ ပေးပါမည်။
နည်းနည်းစီ လစဉ် တတ်နိုင်သလောက် ခွဲလှူသွားကြမယ်။ ကြိုးစားသွားကြမယ် ဆိုရင်ဖြင့် မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် အနာဂတ် ရပ်တည်မှု အတွက် အဆင်ပြေစေမည်ဖြစ်ပါသည်..။
Last edited by tu tu; 14-11-2011 at 11:55 PM..
ကိုဂျိန်း, ချစ်သမီး, ဆန်းမောင်, တာတာ, ဒဿဂီရိ, ဝင်းကျော်ဦး, သူရကျော်ထားဝယ်, ဦးဟန်ညွန့်, ဇော်ရဲပိုင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, ၀တ်မှုံ, arkaraung, AZM, bagothar85, blackNwhite, bonge, crush, g00gle, hellboy, htun30, kaung kin lu, KznT, ma mee, MilkyWay, minthike, minthumon, Nyi Nyi Zaw, PyaitSone, tu tu, zo
ပြန်စာ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်ရံပုံငွေ-
ဦးရဲအောင်ကြီးကိုအွန်လိုင်းမှာမတွေ့ဖြစ်လို့ဒီမှာပဲ ပိုးကောင်လေး ၀င်ရေးထားလိုက်တော့တယ်။ ဖိုရမ်ရန်ပုံငွေ ကိစ္စမှာ မမီး၊ မမတူးတူး၊ ပိုးကောင်လေး တို့ထံလှူဒါန်းနိုင်ပါသည်ပါပြီးတော့ ဖိုရမ်ကအပ်ထားတဲ့ငွေ ဘဏ်အကောင့်ထဲကော ထည့်လို့မရဘူးလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာမှာဆိုးလို့ ဒီနေရာမှာပဲ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်အနေနဲ့ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့
ဘဏ်အမည် - ရွှေဂုံတိုင်ကမ္ဘောဇဘဏ်
ဘဏ်အကောင့် - 0071220031161
အမည် - ဒေါ်ညိုညိုသက် (မမီး) ၊ ကိုငြိမ်းချမ်းအောင် နာမည်တို့ဖြင့်လဲ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
မမီးအမည်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်အမည်ဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ယောက်နာမည်ဖြင့်လဲထည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
may big GOD bless for all!!
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, တီဘွား, ရုပ်ဆိုး, ဝင်းကျော်ဦး, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, bagothar85, bonge, crush, g00gle, htun30, kaung kin lu, KznT, MilkyWay, Nyi Nyi Zaw, PyaitSone, tu tu, Ye Aung, zo